ပွသနာတဈရပျနှငျ့ပတျသကျ၍ တိကရြရောသော ဆုံးဖွတျခကျြတဈခု လငျြမွနျစှာ ခမြှတျနိုငျစှမျးရှိခွငျးသညျ ခေါငျးဆောငျဖွဈလာသူတိုငျးတှငျ တှရှေိ့ရသညျ့ အရညျအခငျြးတဈရပျဖွဈသညျ။ တဈနညျးပွောရလြှငျ ပွတျပွတျသားသား ဆုံးဖွတျလုပျကိုငျခွငျးသညျပငျ အကွီးအကဲ၏ လက်ခဏာတဈရပျဖွဈသညျဟု ဆိုနိုငျသညျ။
ဇဝဇေဝါ ခြီတုံခတြုံဖွဈနသေညျ့ လူစုကွားထဲတှငျ တဈစုံတဈရာကို တိကပြွတျသားစှာ ဆုံးဖွတျပွောဆိုရဲသူသညျ ခေါငျးဆောငျဖွတျလာတတျခွငျးမှာ ဓမ်မတာပငျဖွဈသညျ။
စငျစဈ ကိုယျ့ဦတညျခကျြကို ကိုယျသိကာယငျးဦးတညျရာသို့ တနျးတနျးမတျမတျ လြှောကျတတျသူမြိုးသာ ပနျးတိုငျရောကျစမွဲဖွဈသညျ။ ခြီတုံခတြုံသမား၊ ဟိုဘကျသညျဘကျ အခြိနျဆလှနျကာ ခြိနျခှငျလကျကမခနြိုငျ ဖွဈနသေူမြားကား ဦးတညျခကျြ မရရောသညျ့အလြောကျ ဘယျပနျးတိုငျသို့မလြှောကျနိုငျ၊ မရောကျနိုငျပေ။ ထိုသူမြိုးတှငျ ဘာအရှိနျအဝါ၊ ဘာသွဇာမြှ မရှိ။ သူတို့အမွငျ၊ သူတို့အယူအဆကို မညျသူမြှ မလေးစား၊ အားမကိုး။ အရေးကိစ်စကွုံလာလြှငျ မညျသူမြှ ခေါငျးဆောငျမတငျပေ။
မရရော မပွတျသားသူမြားတှငျ အဓိကဒုက်ခပေးနသေညျ့အခကျြကား ဘာကိုမြှမပဈနိုငျခွငျးဖွဈသညျ သူတို့သညျ “ပဈရမှာကလညျး အဆီနဲ့ဝငျးဝငျး၊ စားရမှာကလညျး သဲနှငျ့ရှပျရှပျ” ဆိုသော အနအေထားမြိုးကို အမွဲရငျဆိုငျနကွေသူမြားဖွသျညျ။ ပွတျသားသူအနနှေငျ့ကား “ပဈမညျဆိုလြှငျအဆီ နှမွောမနနှေငျ့၊ စးမညျဆိုလြှငျ သဲမကွောကျမနနေနှငျ့” ဟုတှေးက တဈခုခုကို ယတိပွတျ ဆုံးဖွတျမညျဖွဈသညျ။
တဈခါက တှကွေုံ့ခဲ့ဘူးသော စိတျရောဂါဆေးရုံတဈခုတှငျ ထိုသို့ဆုံးဖွတျခကျြ မကနြိုငျသညျ့ လူနာတဈဦးပွောပွရပအေုနျးမညျ။ နံနကျစာ စားခါနီးအခြိနျ ကျောရဈဒါတှငျ ရပျနသေညျ့ လူနာမြားအကွား သုတျသုတျပြာပြာရောကျလာကာ နီးရာလူတဈဦးအား “ဝကျသားနဲ့ကွကျသား ဘာစားရငျကောငျးမလဲ၊ ဝကျတော့ကွောကျတယျ” ဟုမေး၏။ အမေးခံရသူက မဖွေ။ နောကျတဈဦးကိုထပျမေးပွနျ၏။ အဖွမေရ။ ထို့နောကျတှငျ လူနာထိမျးတဈဦးအား ၎င်းငျးအတိုငျး မေးပွနျသညျ့အခါ လူနာထိမျးက “ဝကျကွောကျရငျ ကွကျစားပေါ့” ဟု ဖွလေိုကျသညျ။ ထိုအခါတှငျမှ ဆုံးဖွတျခကျြရသှားသောလူနာခမြာ “ဝကျကွောကျရငျ ကွကျသားစား၊ ဝကျကွောကျရငျ ကွကျသားစား” ဟု ရရှေတျကာ ထှကျသှားနိုငျရှာသညျ။ လူနာထိမျးနှငျ့သာမတှလြေှ့ငျ သူသညျ တဈဆောငျလုံးကို လှညျ့ပတျပွီး မေးနမေညျလား မပွောတတျပေ။
စငျစဈ သူ့အမေးမှာပငျ အဖွအေတှကျ လမျးစပါနပွေီးဖွဈ၏။ သို့သျော ထိုအဖွကေို သူ ယတိပွတျမယူရဲပေ။ သူတဈပါးက ဆုံးဖွတျခကျြခပြေးသညျ့အခါမှသာ သူ့စိတျှငျ ပွတျသားသှားပသေညျ။
ထိုအဖွဈမြိုးကို စိတျမှနျ လူကောငျးမြားလောကတှငျလညျး မကွာခဏ တှမွေ့ငျနိုငျပသေညျ။ ဥပမာ “ကြှနျတျော လကျဖကျရညျဆိုငျဖှငျ့မလို့ဗြာ၊ ဒါပမေယျ့ ဒီနားမှာဆိုငျဖှငျ့ရငျ ကွှေးကမြှာဗြ” ဟူသောစကားမြိုး၊ “ကြှနျတျော ကနျထရိုကျဖွဈရငျ ကွီးပှားမှာဗြ၊ ဒါပမေယျ့ ကနျထရိုကျလုပျမယျဆိုရငျ ဒီအလုပျက ထှကျမှဖွဈမှာ” ဆိုတာမြိုး . . .
သညျလူတှေ၏အဖွဈမှာ လကျထဲကမုနျ့ကို စားလညျးစားပဈခငျြသညျ။ ကုနျသှားမှာလညျးကွောကျသညျဆိုသော ကလေးတဈယောကျ၏ အဖွဈမြိုးနှငျ့ ဆငျတူလှသညျ။
ပွတျသားသူအတှကျကားရှငျးသညျ။ နှဈခုမရနိုငျ၊ တဈခုပဲရမညျဆိုသညျ့ အနအေထားမြိုးတှငျ စှနျ့လှတျရမညျ့အရာကို တှေး၍နှမွောမနဘေဲ မိမိဆန်ဒပိုပွငျးပွသောအရာကို ရှေးခယျြလိုကျမညျဖွဈသသညျ။ လကျဖကျရညျဆိုငျသိပျဖှငျ့ခငျြလြှငျ ကွှေးကွောကျမနနှေငျ့။ တကယျကွီးပှားခငျြလြှငျ လကျရှိအလုပျကို စှနျ့ပဈလိုကျ၊ မုနျ့သိပျစားခငျြလြှငျ နောငျခါလါ နောငျခါဈေး၊ ဘာမှမတှေးနှငျ့ စားပဈလိုကျ။ ဒါပဲဖွဈသညျ။
ဖမွေငျ့ - အပွောငျမွောကျဆုံးဘဝတဈခုတညျဆောကျခွငျး မှ ကောကျနှုတျခကျြ
ပြသနာတစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ တိကျရေရာသော ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု လျင်မြန်စွာ ချမှတ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းသည် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာသူတိုင်းတွင် တွေ့ရှိရသည့် အရည်အချင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ခြင်းသည်ပင် အကြီးအကဲ၏ လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
ဇဝေဇ၀ါ ချီတုံချတုံဖြစ်နေသည့် လူစုကြားထဲတွင် တစ်စုံတစ်ရာကို တိကျပြတ်သားစွာ ဆုံးဖြတ်ပြောဆိုရဲသူသည် ခေါင်းဆောင်ဖြတ်လာတတ်ခြင်းမှာ ဓမ္မတာပင်ဖြစ်သည်။
စင်စစ် ကိုယ့်ဦတည်ချက်ကို ကိုယ်သိကာ ယင်းဦးတည်ရာသို့ တန်းတန်းမတ်မတ် လျှောက်တတ်သူမျိုးသာ ပန်းတိုင်ရောက်စမြဲဖြစ်သည်။ ချီတုံချတုံသမား၊ ဟိုဘက်သည်ဘက် အချိန်ဆလွန်ကာ ချိန်ခွင်လက်ကမချနိုင် ဖြစ်နေသူများကား ဦးတည်ချက် မရေရာသည့်အလျောက် ဘယ်ပန်းတိုင်သို့မလျှောက်နိုင်၊ မရောက်နိုင်ပေ။ ထိုသူမျိုးတွင် ဘာအရှိန်အ၀ါ၊ ဘာသြဇာမျှ မရှိ။ သူတို့အမြင်၊ သူတို့အယူအဆကို မည်သူမျှ မလေးစား၊ အားမကိုး။ အရေးကိစ္စကြုံလာလျှင် မည်သူမျှ ခေါင်းဆောင်မတင်ပေ။
မရေရာ မပြတ်သားသူများတွင် အဓိကဒုက္ခပေးနေသည့်အချက်ကား ဘာကိုမျှမပစ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည် သူတို့သည် “ပစ်ရမှာကလည်း အဆီနဲ့ဝင်းဝင်း၊ စားရမှာကလည်း သဲနှင့်ရှပ်ရှပ်” ဆိုသော အနေအထားမျိုးကို အမြဲရင်ဆိုင်နေကြသူများဖြသ်ည်။ ပြတ်သားသူအနေနှင့်ကား “ပစ်မည်ဆိုလျှင်အဆီ နှမြောမနေနှင့်၊ စးမည်ဆိုလျှင် သဲမကြောက်မနေနနှင့်” ဟုတွေးက တစ်ခုခုကို ယတိပြတ် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။
တစ်ခါက တွေ့ကြုံခဲ့ဘူးသော စိတ်ရောဂါဆေးရုံတစ်ခုတွင် ထိုသို့ဆုံးဖြတ်ချက် မကျနိုင်သည့် လူနာတစ်ဦးပြောပြရပေအုန်းမည်။ နံနက်စာ စားခါနီးအချိန် ကော်ရစ်ဒါတွင် ရပ်နေသည့် လူနာများအကြား သုတ်သုတ်ပျာပျာရောက်လာကာ နီးရာလူတစ်ဦးအား “၀က်သားနဲ့ကြက်သား ဘာစားရင်ကောင်းမလဲ၊ ၀က်တော့ကြောက်တယ်” ဟုမေး၏။ အမေးခံရသူက မဖြေ။ နောက်တစ်ဦးကိုထပ်မေးပြန်၏။ အဖြေမရ။ ထို့နောက်တွင် လူနာထိမ်းတစ်ဦးအား ၄င်းအတိုင်း မေးပြန်သည့်အခါ လူနာထိမ်းက “၀က်ကြောက်ရင် ကြက်စားပေါ့” ဟု ဖြေလိုက်သည်။ ထိုအခါတွင်မှ ဆုံးဖြတ်ချက်ရသွားသောလူနာခမျာ “၀က်ကြောက်ရင် ကြက်သားစား၊ ၀က်ကြောက်ရင် ကြက်သားစား” ဟု ရေရွတ်ကာ ထွက်သွားနိုင်ရှာသည်။ လူနာထိမ်းနှင့်သာမတွေ့လျှင် သူသည် တစ်ဆောင်လုံးကို လှည့်ပတ်ပြီး မေးနေမည်လား မပြောတတ်ပေ။
စင်စစ် သူ့အမေးမှာပင် အဖြေအတွက် လမ်းစပါနေပြီးဖြစ်၏။ သို့သော် ထိုအဖြေကို သူ ယတိပြတ်မယူရဲပေ။ သူတစ်ပါးက ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးသည့်အခါမှသာ သူ့စိတ်ွင် ပြတ်သားသွားပေသည်။
ထိုအဖြစ်မျိုးကို စိတ်မှန် လူကောင်းများလောကတွင်လည်း မကြာခဏ တွေ့မြင်နိုင်ပေသည်။ ဥပမာ “ကျွန်တော် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်မလို့ဗျာ၊ ဒါပေမယ့် ဒီနားမှာဆိုင်ဖွင့်ရင် ကြွေးကျမှာဗျ” ဟူသောစကားမျိုး၊ “ကျွန်တော် ကန်ထရိုက်ဖြစ်ရင် ကြီးပွားမှာဗျ၊ ဒါပေမယ့် ကန်ထရိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီအလုပ်က ထွက်မှဖြစ်မှာ” ဆိုတာမျိုး . . .
သည်လူတွေ၏အဖြစ်မှာ လက်ထဲကမုန့်ကို စားလည်းစားပစ်ချင်သည်။ ကုန်သွားမှာလည်းကြောက်သည်ဆိုသော ကလေးတစ်ယောက်၏ အဖြစ်မျိုးနှင့် ဆင်တူလှသည်။
ပြတ်သားသူအတွက်ကားရှင်းသည်။ နှစ်ခုမရနိုင်၊ တစ်ခုပဲရမည်ဆိုသည့် အနေအထားမျိုးတွင် စွန့်လွှတ်ရမည့်အရာကို တွေး၍နှမြောမနေဘဲ မိမိဆန္ဒပိုပြင်းပြသောအရာကို ရွေးချယ်လိုက်မည်ဖြစ်သသည်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သိပ်ဖွင့်ချင်လျှင် ကြွေးကြောက်မနေနှင့်။ တကယ်ကြီးပွားချင်လျှင် လက်ရှိအလုပ်ကို စွန့်ပစ်လိုက်၊ မုန့်သိပ်စားချင်လျှင် နောင်ခါလါ နောင်ခါဈေး၊ ဘာမှမတွေးနှင့် စားပစ်လိုက်။ ဒါပဲဖြစ်သည်။
ဖေမြင့် - အပြောင်မြောက်ဆုံးဘ၀တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း မှ ကောက်နှုတ်ချက်